हामीले एमाले स्वीकार गर्‍यौं, एमाले नेता-कार्यकर्ताले हामीलाई अनुमोदन गरे : लेखराज भट्ट [अन्तर्वार्ता]
नेपाल लाइभ बिहीबार, मंसिर १६, २०७८, १५:५६
तत्कालीन नेकपाले वैधता नपाएर साविकका एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिएपछि नेकपा माओवादी केन्द्रमा लामो समय राजनीति गरेका नेताहरू रामबहादुर थापा ‘बादल’, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साहलगायतले माओवादीको साटो एमाले रोजे। उनीहरूलाई माओवादी केन्द्रमै फर्काउन अध्यक्ष पुष्कमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अथक मिहिनेत र प्रयास समेत गरे। तर, उनीहरू माओवादीमा नफर्केर एमालेमै सक्रिय भए।
उनीहरूमध्ये तीन नेता एमालेको दशौं महाधिवेशनबाट पदाधिकारी र १९ जना केन्द्रीय कमिटीमा अटाउन सफल भए। जसमा रामबहादुर थापा ‘बादल’ उपाध्यक्ष, टोपबहादुर रायमाझी र लेखराज भट्ट सचिवमा निर्वाचित भए। सचिव पदमा निर्वाचित भट्टसँग माओवादी हुँदाका अनुभव र एमालेमा निर्वाचित भइसकेपछिको अनुभूतिका विषयमा नेपाल लाइभका लागि वीरेन्द्र ओलीले गरेको संक्षिप्त कुराकानी :
तपाईं लामो समय माओवादीमा हुनुहुन्थ्यो। अहिले एमालेबाट सचिव निर्वाचित हुँदा कस्तो महसुस भइरहेको छ?
यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएको छु। हामी संसदीय अभ्यासमा आउँदा निर्वाचन जित्दा अनौठो लाग्थ्यो। हामी नौलो परिपाटीमा छिरेका थियौं। त्यतिबेला पनि अनौठो नै भयो। अहिले नेता, कार्यकर्ता सबैबाट मत पाएर जित्दा फरक अनुभूति भइरहेको छ। एउटा नयाँ खालको जनवादी अभ्यास हो भन्ने लागेको छ।
तपाईंले सचिव पदमा उम्मेदवारी दिँदा हारिएला कि भन्ने चिन्ता लागेन?
त्यतिबेला मलाई चिन्ता थिएन। अध्यक्षले हलमै नामावली प्रस्तुत गर्नु भएको थियो। हलले ताली पिटेर अनुमोदन गरेको थियो। निर्वाचन पद्धतिमा जानुपर्ने भएकाले उम्मेदवारी दिएको थिएँ। तर, जुन प्रकारले हलले नामावलीमा समर्थन गरेको थियो। त्यतिबेलादेखि नै ढुक्क थिएँ। सचिव पदमा सजिलै निर्वाचित हुन्छु भन्ने लागिसकेको थियो।
सचिवमा निर्वाचित भएपछि एमाले नेता कार्यकर्ताले तपाईंहरूलाई स्वीकार गरिसके भन्ने पुष्टि भयो हैन त?
हामीले एमालेलाई स्वीकारेरै एकतालाई निरन्तरता दिएर आयौं। त्यसलाई एमाले नेता कार्यकर्ताले अनुमोदन गर्नुभयो। त्यसमा दुवैपक्ष सकारात्मक भए भन्ने पुष्टि भयो।
महाधिवेशनमा पूर्वमाओवादी पक्ष बोल्दा पनि समस्या, नबोल्दा पनि समस्या भएकाले चुपचाप थिए भन्ने आरोप थियो नि?
हामी महाधिवेशनमा चुपचाप थिएनौं। विधान महाधिवेशनदेखि लिएर राष्ट्रिय महाधिवेशनसम्म आउँदा आफ्ना विचार राख्दै आएका थियौं। बाहिर बुझ्नेले कसरी बुझे, भन्नेले कसरी भने, आ–आफ्नो कोणबाट भन्ने कुरा भयो। हामी चुपचाप लागेका थियौं भन्ने कुरा गलत हो।
माओवादी र एमालेमा तात्विक रूपमा के फरक पाउनुभयो?
हिजो हाम्रा महाधिवेशन, अधिवेशन, भेलाहरूबाट नेतृत्वले नामावली प्रस्तुत गर्थ्यो। त्यसलाई हात उठाएर अनुमोदन गरिन्थ्यो। अनि हिँडिन्थ्यो। त्यो पनि एक प्रकारको जनवाद थियो। अहिले मतपेटिकामै मत हालेर जसरी निर्वाचन भयो, त्यो नयाँ भयो। अझ अहिले इलेक्ट्रोनिक मेसिन नै प्रयोग गरेर मतदान गर्दा झन् नयाँ अनुभव भयो।
माओवादीमा हुँदा पनि प्रचण्डसँग निकट हुनुभयो। एमालेमा हुँदा केपी ओलीसँग निकट हुनुहुन्छ। यी दुई नेताको कार्यशैलीमा के भिन्नता पाउनुभयो?
हरेक मान्छेका आ–आफ्नै स्वभाव हुन्छन्। अध्यक्ष केपी कमरेडको लामो कुरा राख्ने र अझ छलफल गर्न रूचाउने स्वभाव रहेछ। पार्टीका तलसम्मका कार्यकर्तासँग घुलमिल हुने स्वभाव छ। प्रचण्ड कमरेड विशेषगरी तलबाट रिर्पोटिङ लिने, तलसम्म भेटघाट गर्ने गर्नुहुन्नथ्यो। प्रचण्ड छोटो कुरा राख्नु हुन्थ्यो। धेरै नेता कार्यकर्तासँग छलफल बहस गर्न रूचाउनु हुन्नथ्यो।